नयाँ दैनिक | बिचार/ब्लग बिचार/ब्लग – नयाँ दैनिक
साउन २६, काठमाडौँ । मानव अधिकार अभियन्ता कृष्ण पहाडीले हालै एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘राजतन्त्र खोल्लिएको अन्डाजस्तै भएकाले फालिएको हो, फेरि त्यो सडेको अन्डालाई भान्सामा ल्याउन सकिँदैन ।’ शिरदेखि पाउसम्मै नागरिक अभियानका अगुवा मान्न सकिनेमध्येका पहाडीको यो निष्कर्ष त्यस्तो बेलामा अभिव्यक्त भएको छ, जुन बेला खोल्लिएको ‘अन्डा’ को गन्धको हरक ...
साउन १९, काठमाडौँ। अचानक ‘देश बदल्ने बाटो’ मा पुष्पलाल फेला परे भने के होला ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै कोरेको ‘देश बदल्ने बाटो’ (कान्तिपुर, ७ साउन) पक्कै पनि एक ठाउँमा पुगेर उनलाई चामत्कारिक लाग्ला । केही साथीसँग कलकत्ताको गुमनाम कोठामा ७० वर्षअघि आफूले गठन गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा अवतारले शक्तिशाली सरकार चलाइरहेको थाहा पाउ...
असार २०, काठमाडौँ।सत्ताधारीहरूले आआफ्ना राज्यका नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि विस्तारै–विस्तारै अंकुश लगाउँदै तिनीहरूको निर्देशन÷आदेशअनुसार बाँच्न बाध्य गराउँछन्, त्यसलाई ब्रिटानीका विश्व कोषको परिभाषाअनुसार सर्वाधिकारवादी÷सर्वसत्तावादी÷एकदलवादी÷टोटालिटेरियानिज्म सत्ता भनिन्छ। बीसौं शताब्दीमा त्यस्ता सर्वसत्तावादी राज्यसत्ताहरूमध्ये सोभियत रूसको स...
असार १९ काठमाडौँ । जोक्कर्‍याइँ जीवनको प्रधान तत्त्व होइन, सहायक तत्त्व हो । नभई नहुने, ज्यास्ती भए बित्यास पर्ने । त्यसैले जोक्कर नाटकको नायक होइन, केवल खलनायक महलको जीव हो । जीवनको वास्तविक नाटकमा जब खलनायक मार्काको जोक्कर नै नायक बन्छ, जीवनको अर्थ र गरिमा चौपट हुन्छ । सत्ता राजनीतिको हकमा पनि कुराको चुरो यही हो । जब सत्ता राजनीति कमिकतुल्य...
कतै पढेको थिँए । चिप्ले किरा आफ्नो गन्तव्यमा धैर्यताका साथ अघि बढ्ने क्रममा बाटो निर्माण गर्छ र अरुका लागि पनि गोरेटो निर्माण गरिदिन्छ । लेखन कार्यले पनि चिप्ले किराले जस्तै एउटा उदेश्य बोकेर गन्तब्य तय गरेको हुन्छ । जसले आफुभन्दा पछिका अन्यको लागि गोरेटो प्रदान गर्दछ । विश्वविद्यालयको कक्षा कोठामा नेपालका नामी समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भन्नु...
असार १५, काठमाडौँ । विकास र समृद्धि यतिवेला नेपालको राष्ट्रिय मन्त्र बनेको छ । सत्तामा हुनेहरूले रातदिन विकास र समृद्धिको मन्त्रोच्चारण गर्छन्, तर संघीयता र समावेशिताप्रति ठूलो अरुचि र आशंका पनि व्यक्त गर्छन् । मानौँ– राज्य केन्द्रीकृत बनेपछि सम्पूर्ण अधिकार राज्यसत्तामा रहनेका हातमा केन्द्रित भई एकल जातीय वर्चस्वका कारण छिटो विकास हुन्छ । अन...
राजनीतिको अमूर्त खेलभित्र हुने नियम परिवर्तनले सत्ताको फेरबदल कतिखेर, कसरी हुन्छ भन्ने विषय साधारण मानिसको ज्ञानभन्दा धेरै पर हुँदो रहेछ । ०६०को दशकमा नेपाली राजनैतिक क्षेत्रमा यस्तै विशिष्ट प्रकृतिका सत्ता परिवर्तनका श्रृंखला देखा परे ।
संवैधानिक भनिएको राजसंस्था कार्यकारी अधिकारसहित सत्ताको मुख्य नेतृत्वमा आयो भने सत्ता सञ्चालनमा का...
बि.स.२००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो । त्यसलगत्तै केही समयको अन्तरालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीच बिभाजनका शृङ्खलाहरु देखा पर्न थाले । दुई भिन्दाभिन्दै विचार र प्रवृतिहरु देखा परे । एउटा विचार जस्लाइ अग्रगामी धार भनिन्थ्यो वा मानिन्थ्यो भने अर्को धारलाइ ती मान्छेहरुले प्रतिगामी धारको रुपमा व्याख्या गर्थे । अझै भनौँ क्रान्तिकारी र गैर ...
केही महिनाअघि एक जना साथीको आमाको मृत्युको शोकमा समवेदना प्रकट गर्न पुग्दा उनले भन्थे, ‘उमेर त आमाको बयानब्बे थियो तर के गर्नु...? आमा भनेको पाँच सय वर्ष बाँचे पनि थोरै लाग्ने रै’छ  । ’ विश्वका विभिन्न सभ्यताहरूमा रचिएका साहित्यहरूमा आमाको विम्ब धेरै नै माथि छ  ।
पूर्वीय नाम दिइएको हाम्रो समाजमा त आमालाई अझै व्यापक आयाममा प्रस्तुत गरि...
अप्रिल २१, २०१९ अस्ति आइतबारको दिन श्रीलंकामा इस्टर पर्व मनाइरहेका र पाँचतारे होटेलमा बसेका मानिसहरूमाथि आठ चरणको बम आक्रमण भयो । आक्रमणको निशाना इसाईहरू थिए । कोलोम्बोका चार होटेल सिनामन ग्राण्ड, सांग्रिला, किन्सबरी र ट्रोपिकल इनमा आक्रमण भएको थियो ।
कोलम्बोको सेन्ट एन्थोनी स्राइन चर्च, नेगोम्बोको सेन्ट सिबास्टियन चर्च, बाट्टिकालोआको...
आज देश भिन्न परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ। बि.स. २००६ सालमा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ०७५ सालमा आएर पुनः एक भएका छन् । एकताको घोषणासभामा पूर्वमओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘यो एकता संगठानिक मात्र नभइ भावना एकता भएको र जुन देश र जनता अनि कम्युनिस्टको लागि आवश्यक रहेको’ बताएका थिए । तर भावनात्मक एकता नै हो भन्दैगर्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ...